Sunday May 02, 2021 - 09:13:05 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q Mohamed Aden Hassan.
Insha allah 31 may 2021 o ah maalin isniina , Dalkeena waxa ka dhacaysa doorashoyin isku sidkan o baarlamaan iyo degaan waa doorashadii 7aad ee qof iyo cod ah waa dhamaystirka geedi socodka Somaliland waa jawaab furan o ku socota dunida o cadayn ah jihaynta dalkeena Somaliland o ay ka dhacaan doorashoyin xor ah o xalaal ah is markaana qof iyo cod ah waxay xal xidhaale qadhaadh u tahay geeska Africa iyo Africa guud ahaan.
Dalkan Somaliland waxa ka jirta nabad taam ah is ogol siyaasaded o bisayl ku ladhanyahay waxa aynu maalin ba maalinka ka danbaysa horumarkeena ku darsamaya wax wayn o hore loo qaaday wallow ay jiraana dib dhicyo badan o ay tahay in si deg deg ah loo xaliyo waana arimaaha aynu uga baahanahay xildhibaanada hadda soo socda e barlamaan iyo degaan si u usii socda horumarka dalkeena o ay dunida ina gu amaantowax wada qabsi iyo nabad.
Horta waxaan aad u amanayaa darafyada dawladda o heegen ku jira qabsoomida doorashoyinka dalkena ukuur galka xaaladaha jira iyo kuwa iman doona , ilaalinta amniga dalka iyo muwaadininta
Somaliland shaqada ay hayaana ad bay ugu amananyihiin.
Taloyinka aynu u bahanhay waa:
1. In muwaadin walba halkiisa isku xilqaamo o ka shaqeeyo xaladaha amni isla markaanaa u halkisa is xilqaame ku noqdo.
2. In wixi jira u arko usoo gudbiyo lamaaha ay khusayso e amniga dalka si deg deg wax loogu qabto xaladaas.
3. In muwaadinka si nabad gelyo ah u galo safka isla markaana si nabad galyo ah ku codeeyo.
4. Wa in u si wacan u raaca tilmamaha iyo shurudaha commision ka doorashoyinka qarankeena.
5. Waa in cid walba o ka shaqenaysa doorashiyinka ay si mas’uliyad ah ay uga shaqeeyan o ilaahay dartii ah maadama ay xisaab ilaahay jirto.
Musharax walbaa waa in u ilaaliya hab raaca dorashoyinka dalka iyo xeer walba sidiisa.
2. Musharaxu waa in astaantisa barlamaanka u si wacan ugu sii dhaadhiciyo tagerayashiisa , musharaxa degaankuna waa in uu lambarkiisa ka sii dhaadhiciyo tagerayashisa maadama ay jiraan dad aan waxna akhriyin waxna qorin si ay usii fahmaan sida iyo Qaabka loo cadeenayo.
3. Musharax walbaaba waxa u filayaa guul iyo guul daro sida daraded cidi ilaahay u qoray way soo baxayaan si shaki la’aana waliba nidaam cadalad ah maadama aynu xaga doorashoyinka aynu qaan gaadh ka nahay sida daraded waxan ku talinayaa in aan musharaxna saluugin isla markaana aanu cambaraynin nidaamka doorashoyinka dalka o aan saaxafada ka hadlin waa in la waaya cid
dhalacaysa dorashada kana dhalacaysa saxaafada maadama ay doorashadani tahay , doorashadii geedi socodka dalkeena iyo u xiib siibashada ictiraafka dalka.
4. Qasab cabasho way iminaysaa e waa in si hoose loogu gudbiyo commosion ka qaranka isla markana la xaliyo sida ugu wacan iyada o waliba warqad qoraal ah taas waxa ay ka bajinaysaa musharaxi ka hadlida saxaafad.
1. Xisbiyadu waxa ay ilalinyaan nidamka doorashoyinka dalka sida daraded waa in si wada jira 3 xisbiba gacmaha isu qabsadaan waana wax inoo muuqdaba sida wacan u uga wada shaqenayaan arintaas waana in in si hoose wax lo eega.
2. Xisbi walbaaba halkiisa ayu doorka ka ciyaaraya waa in u kasii kordhiyaa.
1. Waxa aan aad ugu amanaya shaqada ay hayaan laamaha amaanka o mar walba heegan ugu jira nabad galyada iyo xasiloonida dalkeena waxanan kula talinayaa shaqadina halkaas kasii wada waxa dhimana dhamaystira insha allah.
2. Waxa kale o amaan mudan xukumada manta jirta sida ay doorashoyinka uga soo shaqaysay waxanan iyana xukumada kula talinyaa in ay xadhiga ka dayso musharixinta maadama ay xasanad leyihin sida sharcigu shegay , hadda agow waxana furan o ayxakumada ku tagersanyihiin shacbiga gobta ah e Somaliland in cid walba o ka hor iminaysa madaxbananida iyo nabada Somaliland in la xidho isla markana ay xasanadasi ay burayso.
Ugu danbayn qof walba madaxwaynaha qaybaha xukumada , lamaha amniga e dalka iyo cid walba waxa saran waajib ah ilaalinta nabad galyada dalkeena iyo dhicitaanka doorasho bilaa xasarad ah o si nabdoon inagu dhacda isla markana wanaag ino soo hoysa insha allah.
TWITTER: H.E Mohamed Aden Hassan